Diyo post :: सन्दिपले आइपिएल खेल्ने, दिल्ली डेयरडेभिल्सद्धारा २० लाख भारुमा अनुवन्धित सन्दिपले आइपिएल खेल्ने, दिल्ली डेयरडेभिल्सद्धारा २० लाख भारुमा अनुवन्धित - Diyo post
सन्दिपले आइपिएल खेल्ने, दिल्ली डेयरडेभिल्सद्धारा २० लाख भारुमा अनुवन्धित
काठमाडौँ । नेपाली क्रिकेट टोलीका टप स्पिन बलर सन्दिप लामिछानेले भारतको महङगो क्रिकेट टुरनामेन्ट आइपिएल खेल्ने भएका छन । उनलाइ भारतिय क्रिकेट टोली दिल्ली डेयरडेभिल्सले न्युनतम २० लाख भारुमा अनुवन्धित गरेको हो ।
आगामी सिजनको लागी आइतबार भएको अक्सनमा १७६ औँ स्थानमा रहेका नेपाली क्रिकेटर लामिछानेलाइ दिल्लीले चयन गरेको हो । यसअघि लामिछाने अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल क्लर्कको सिड्नीमा आधारित रहेको क्लब वेस्टर्न सबअर्बस्बाट खेल्ने मौका पाएका थिए । उनले क्लार्कको क्रिकेट एकाडेमीमा प्रशिक्षणसमेत गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
नेपाल र नामिविया विच २०१६ मा भएको खेलबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका उनले हालसम्म ९ खेलमा १२ विकेट लिएका छन । अनक्याप्ड प्लेयर्समा रहेका लामिछानेलाई यसपटकको आइपीएलमा हेरिन लायक युवा खेलाडीको सूचीमा राखिएको छ । यो संगै लामिछाने आइपिएलमा बिक्रि हुने पहिलो नेपाली खेलाडी भएका छन । दिल्लीको टिममा गौतम गाम्भीरदेखि ग्लेन म्याक्सवेल, ट्रेन्ट बोल्ट, पृथ्वी शाह समेत छन् । उनलाइ प्रवेशमा भारतिय टिम दिल्ली डेयरडेभिल्सले ट्वीट गर्दै स्वागत गरेको छ ।
You've already made history, @IamSandeep25. Here's to more with the #DDSquad! 😀#IPLAuction #DilDilli pic.twitter.com/POHrvrHWgm
दिल्ली डेयरडेभिल्सको टिममा परेपनि आईपीएल खेल्न भने सन्दिपले अझै एक खुड्किलो पार गर्नु पर्ने हुन्छ । मिटमा आवद्ध खेलाडीहरुबाट १८ सदस्य छानिन्छन्, जो मैदानसम्म जानेछन् । खेल्नका लागि त उनी फस्ट इलाभेनमा पर्नु पर्ने हुन्छ ।